Funda i-AutoCAD ngeevidiyo- iiGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Funda i-AutoCAD ngevidiyo
AutoCAD-AutoDeskUkufundisa i-CAD / GIS
Funda i-AutoCAD ngevidiyo
Kukho ubuncinane iindlela ezimbini zokufunda i-AutoCAD;
Owokuqala uthatha ikhosi ehlelekile, ngexabiso lomzi wakho kunye nenani leentsuku kunokukuthatha
Okwesibini kukubona uchwepheshe wenza umsebenzi esiwufuna ukuwuvula, kunye nethuba lokumisa, ukuphinda uphinde uzame yedwa.
Yiyo Inkqubo ye-AutoCAD Ngokusekelwe ekufundeni okuzifundisayo ngokwenza iividiyo, ngesishwankathelo kunamathuba amathathu:
1 Iinyathelo ngeenyawo iividiyo
Xa umfundi efuna ukuqala i-AutoCAD ngokwabo bayaqiniseka ukuba ingxaki enkulu ayinayo ingcamango yokuqala. Ngoko ke, ikhosi, ngokubonisa isicwangciso njengoko kuya kuba sekupheleni kwaye ukuhamba ngesinyathelo ngesinyathelo isinika umfundi umboniso opheleleyo wendlela yokwenza umsebenzi we-AutoCAD.
Iividiyo ziyindlela elula yokufunda i-AutoCAD, kuba, unako ukuma nanini na, uphinda okanye uphucule ngesandla xa ungenasineke.
2 Iimpawu ze-25 ezisetyenziswa kakhulu kwi-AutoCAD
Xa umfundi ethatha incwadi ye-AutoCAD enokubakhokhela i-$ 45, uyazithemba ukuba akanako ukuyisebenzisa, kuba nje ukuchaza i-interface ye-11 idlulisela iphepha elaneleyo lokuzalisa umonde.
Nangona i-AutoCAD inomyalelo omkhulu, ikhosi igxile kwi-25 apho inani elikhulu lomsebenzi lwenziwa kwiiplani zokwakha ze-2D. Le miyalelo ikhona phantsi komgaqo ofanayo wokusetyenziswa ukusuka 2.4 version I-AutoCAD kwi-1986, njengoko ixesha lihamba ngumbonakalo womsebenzisi litshintshile kodwa imiyalelo iyaqhubeka nokubonelela ngendlela efanayo nekhampasi kunye neesethi yeebhite kwibhodi yokudweba.
Le miyalelo ingama-25 yile: 11 ukwenza izinto, 13 ukuzihlela kunye nesalathiso esinye. Ukongeza eminye imisebenzi eyongezelelweyo enjengokuprinta kunye nokwenza umlinganiso kubonisiwe. Ekugqibeleni, umfundi ufunde ukusebenzisa imiyalelo ye-interface ngaphandle kokuba abe nesahluko esinye esizinikezele kuso.
3 Iprojekthi yokwakha yangempela.
Nangona le khosi ibonisa ukusebenza kwale miyalelo ephambili ye-25, kukuphuhliswa kwiprojekthi apho iyaziwayo ziyaziwayo.
Le projekthi ithatha oku kulandelelana:
Ukulungiselela umdwebo omtsha
Doors kunye neefestile
Izikhulo kunye nemifanekiso
Indlela yokufumana le ncwadana
Le ncwadana yayifumaneka ngaphambili kwiLulu.com, apho ihlawulwe ngamakhadi-kredithi, kuquka ne-Paypal kunye neLulu yayinoxanduva lokuyithumela emnyango wendlu yakho.
Ngoku sele yenziwe kwiividiyo ze-Youtube, ongayibona kule nqaku I-AutoCAD Course ngenxa yokuba ingaqalwanga.
Ukupapasha iinkonzo ze-OGC kwi-GvSIG
INkcazo Yehlabathi Yezicwangciso
Amabali oosomashishini. Yenyani.com
INFRAWEEK 2021 - ubhaliso luvulekile
Le khosi ayisekho ukuthengiswa kwiLulu.com
Kodwa uyayibona kwi-YouTube kweli nqaku.
ukuqeqeshwa okuthakazelisayo, kubalulekile kubo bonke abafundi bezakhiwo.
Ukuyithenga kufuneka uqakraze kwisixhumanisi seLulu.com
oscar suasnabar aguilar uthi:
Unomdla kakhulu kwaye kubalulekile ukufunda i-autocad.
kodwa apho kufuneka ndihlawule iRandi le-15.15.
jprge hernan uthi:
Hlola i-autocad yakho ye-ent5ero kwaye ufunde ngokukhawuleza ok.
Ndiyayithanda idolophu yam ihlala i-animas leyo i-miy vonito kwaye ngokokuba amaqela kaJuni abekwa ngabazali kakhulu ndiyakumema ukuba udibanise uluntu lwase-Estancia De Animas
Sawubona kuwo wonke umntu ..
Ndimema wonke umntu ukuba afunde ukulawula i-autocad ibaluleke kakhulu,
Ndingathanda umntu ukuba andenzele inceba yokundinika idilesi yewebhu apho ndinokufumana isikhokelo sokufunda indlela yokusingatha i-arcgis, ngesiSpeyin.
siyabonga ngokungapheliyo ngqalelo kunye nentsebenziswano.
Impumelelo kunye noloyiso ...
ngokungathi iselingene Iividiyo ziya kuba kakuhle yaye yonke into kodwa mna andikwazi nkqu download inkqubo simahla benza ngoko ke oko bakuzisileyo ezi iividiyo, plus Andazi ukuba iividiyo kwi-CD okanye VHS, jummmm, kufuneka ukukhuphela inkqubo AutoCAD simahla ukuba it efakwe kamatshini uqale abaqhuba xa befika iividiyo, web okanye iseva ukuba phantsi simahla ukususela okuphuma nto ihlambulukileyo wevadas ilahleko, ezinye umonakalo nento jejejejeje enye
orlando fragozo arzuaga uthi:
yintoni inkqubo endimele ndiyifunde ukuyifunda
Zintle iigeofumados zakho kwaye ngamanye amaxesha ukucacisela abantu i-GIS kwaye bakuqonde ngokupheleleyo, kuya kufuneka uyitshaye iluhlaza ngaphezulu kwayo yonke into xa uyibeka uyenze hehehhehe….
UJoseph Vidal uthi:
Ndingathanda ukuthatha ulwazi ngeedisk okanye kwividiyo kodwa andiyazi ngendlela
inyaniso kukuba yiyiphi inkqubo abayincoma ukuba unako ukuxelela mna beatriz adriana
Xa ufaka ikhonkco, kufuneka ukhansele ngekhadi lesikweletu. Kuvumelekile nakweliphi na ilizwe
I-LUIS ALBERTO IINKCUKACHA ZENJONGO uthi:
LAPHO NDIFUNDA UKUKHALISA I-15.50 DOLLARS
NDIYA KUZIWA UKUBA IMITHETHO EYENZIWA NGAYO IYAVALWA NGE-PERU
Ndingathanda ukufunda i-autocad, kodwa andazi ukuba ixabiso liphi,
Ndingathanda ukufunda ukubonelela
beatriz adriana uthi:
Kungcono kakhulu ukwazi ukuba i-aut cad es cencillo yenze kuphela kwaye uya kubona ukuba ipholile
Kufuneka uyithenge kwi-intanethi, usebenzisa ikhadi lekhredithi.
kubonakala ikhonkco ukwenza loo nto.
Antonio A. uthi:
Ngumuphi umzi waseColombia kunye nendawo yokugcina i-cd?
lukhulu kakhulu, kodwa phendula imibuzo esiya kuyo
i-cd ifumaneka kwi-Lulu, ixabisa i-$ 15.50, kunye nokuthunyelwa kwempahla; Ungayithenga ngekhadi lesikweletu kwaye iya kufika kwidilesi yakho
RONNY JIMENEZ uthi:
Ndingathanda ukuba unike lonke ulwazi ukuba ngikwazi ukucela i-autocad izifundo kwiividiyo kuquka nexabiso elibulelo
javier ordoñez uthi:
hi ndizinike iiklasi ze-autocad ubuncinane ubuncinane ukuba umntu unomdla kule i-imeyile yam ulungelelaniso3000@hotmail.com i-cell ye-0424-1738526 nayo i-economic well with manual and hours and I will tell you thanks to the courses given by Internet
Inyanga iyavuyiswa ngokukhuthaza izifundo ukuze incede abafundi abaninzi
i-cd yafumaneka kwiLulu, ngentengo ye $ 15.50 kwaye awukwazanga ukuyilanda, vele uyithumele ngeposi
Ndingathanda ukufunda kodwa andiyazi ukuba yintoni endikufuneka ndiyikhuphele ukuba ingandinceda, kuya kuba luncedo kum, ndibulela kakhulu !!
Ndingathanda ukufunda kodwa andiyazi into endiyifuna ukuyilanda kule nkqubo
CARLOS ANDRES VILLEGAS uthi:
NGAPHAMBILI FUNDA I-AUTOCAD
INkosi ekuCwangcisweni kweNdawo ye-UNAH
Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 3
Ukulungelelaniswa okuphambili, imiphezulu, amacandelo eminqamlezo. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi esisiseko yomgama ngesoftware ye-Autocad Civil3D esetyenziswe ...